Man United oo hoggaanka u heysa tartanka loogu jiiro Robert Lewandowski. | Gooldhalin
Man United oo hoggaanka u heysa tartanka loogu jiiro Robert Lewandowski.
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay hogaamineyso tartanka loogu jiro saxiixa Robert Lewandowski oo ka yimid Bayern Munich xagaagan.
Mustaqbalka Lewandowski ee Allianz Arena ayaa isbuucyadii u danbeysay waxaa ku jirey madmadoow ka dib markii uu bedelay wakiilkiisa, isagoo u magacaabay Pini Zahavi .
Warbixinta ayaa sheeganeysa in United ay tahay kooxda kaliya ee ugu cad saxiixa xiddiga heerka caalami ee dalka Poland, inkastoo Jose Mourinho uu horay u sheegey inuusan u baahneyn weeraryahan kale oo kooxda ku soo biira.
Bayern ayaanan dooneynin inay lumiso weeraryahankeeda, lakiin waxa ay u badan tahay inay bixiyaan qiimo weyn ka hor inta aysan dalab u gudbin, iyadoo Lewandowski uu qandaraaska u saxiixay Bavarian-ka ilaa 2021.